Brexit ကြောင့် နိုင်ငံအတွင်း တင်းမာနေသော ဗြိတိန်သို့ ထရန့် ရောက်ရှိလာ - Yangon Media Group
Brexit ကြောင့် နိုင်ငံအတွင်း တင်းမာနေသော ဗြိတိန်သို့ ထရန့် ရောက်ရှိလာ
လန်ဒန်၊ ဇူလိုင် ၁၂
ဗြိန်တိန်ဝန်ကြီးချုပ် ထရီဆာမေ၏ ဥရောပမှထွက်ခွာမည့်အစီအစဉ်အပေါ် သံသယရှိကြောင်းဆိုခဲ့ပြီး နာရီအနည်း ငယ်ကြာ သူ့အားဗြိတိန်ပြည်သူများက အလွန်နှစ်သက်သည်ဟု ပြောသော်ငြား လက်တွေ့၌ ၎င်းလာလျှင် ဆန္ဒပြကြရန် နိုင်ငံတစ်ဝန်းစီစဉ်ထားရှိသော ဗြိတိန်သို့ အမေရိကန်သမ္မတထရန့် ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်သည်။
ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်မေက ထရန့်၏ လာရောက်မှုက အနာဂတ် ဗြိတိန်-အမေရိကန်လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်ရေး သ ဘောတူညီစာချုပ် ဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်သော်ငြား ထရန့်၏ Brexit အပေါ်အမြင်က ယခုလာရောက်မှုခရီးစဉ်အား အရိပ်ထိုးလွှမ်းမိုးနေလေသည်။ ထရန့်က ”ကျွန်တော် နိုင်ငံရေးအရ အငြင်းအခုံတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့နိုင်ငံ၊ ထိပ်သီးအစိုးရအရာရှိတွေ နုတ်ထွက်နေတဲ့နိုင်ငံကို သွားရမှာ ဟုတ်တယ်ဟုတ်”ဟု ဘရပ်ဆဲလ်ရှိ NATO အစည်းအဝေး၌ ပြော ကြားခဲ့သည်။
”ပြည်သူတွေက အီးယူကထွက်ဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဒါကို သူတို့အ ကောင်အထည်ဖော်ကြမယ်လို့ ကျွန်တော်မြင်တာပဲ။ ဒါပေမယ့် အခုသူတို့က နည်းနည်းကွဲလွဲတဲ့လမ်း ကြောင်းကို သွားနေတဲ့ပုံပဲ”ဟု ထရန့်က ပြောဆိုခဲ့သည်။ ထရန့်၏ မှတ်ချက်စကားများအပေါ် မေက ”ကျွန်မတို့ရဲ့ ငွေကြေးတွေ၊ ဥပဒေ တွေ၊ နယ်စပ်ဂိတ်တွေကို ကျွန်မတို့ပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ ပြည်သူတွေပေးတဲ့ မဲအပေါ် အကောင်အထည်ဖော်ဖို့လုပ်နေတာပါ”ဟု ဆိုခဲ့သည်။
ထရန့်သည် Brexit အား ထောက်ခံသူဖြစ်ပြီး Bexit ကြောင့် ဗြိတိန် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများနှင့် ကုန်သွယ်ရေးစာချုပ်များချုပ်ဆိုနိုင်လိမ့်မည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ ထရန့်က ယခုခရီးစဉ်၌ ၎င်းသည် မကြာသေးမီကပင် ရာထူးမှနုတ်ထွက်သွားခဲ့သော ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဘိုးရစ်ဂျွန်ဆင်နှင့်လည်း တွေ့ဆုံမည်ဟု ပြောကြားထားသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက် နယ်စပ်၌ ညမထွက်ရ အမိန့်ထုတ်ထားခြင်းကြောင့် နန်းဖာလုံဈေး၌ အရောင်းအဝယ် ကျ?
ထိုင်းနိုင်ငံ ခိုရပ်မြို့ ဗန်းဂါ့ဒ်ကြက်သား ပြုပြင်ထုပ်ပိုး စက်ရုံ မီးလောင်
Project X ရုပ်ရှင်တွင် ဂျွန်စီနာနှင့်အတူ သရုပ်ဆောင်ရမည့် ဂျက်ကီချန်း
ပါရာဂွေးနိုင်ငံတွင် ရေကြီးမှုကြောင့် မိသားစုပေါင်း ခုနစ်သောင်းကို နေရာရွှေ့ပြောင်းပေးထားရ
သမ္မတသစ်သည် ထက်မြက်ပြီး လုပ်ကိုင်ပြောဆိုရဲသူဖြစ်၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏ လုပ်ပ??